Shiinaha Tungsten Carbide Baqashada qulqulka Soo-saaridda iyo Warshad | N&D Carbide
Baqashada qulqulka Tungsten carbide ee noocyada kala duwan ee qaabeynta iyo qeexitaannada loo adeegsado xirashada xaaladaha daaqa iyo nabaad-guurka. Waxaan soo saarnay si sax ah loogu talagalay loogu talagalay daloolka dhexroor ee wareejinta fudud ee gaaska iyo dareeraha batroolka. Qafiska qulqulka ee aan bixino waxaa si sax ah loogu talagalay god ballaran si loogu wareejiyo gasaska iyo dareeraha batroolka. Qaab dhismeedka adag iyo shaqeynta wax ku oolka ah ayaa ah sababaha ugu muhiimsan ee baahida sare ee qulqulka qulqulka ee aan u dirno suuqyada.l.
Hore: Ceeji Jir iyo Fadhi
Xiga: Tungsten Carbide Disk for Madax